ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကြား ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး | ဧရာဝတီ
ရန်ပိုင်| February 18, 2013 | Hits:6,585
2 | | ပဋိပက္ခ ပြီးခါစ စစ်တွေမြို့ကို ဤသို့တွေ့ရသည် (ဓာတ်ပုံ – ခင်သြ / ဧရာဝတီ)
ရခိုင် လူမျိုးများနှင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုးများမှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ရခိုင် ဒေသအတွင်း အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့ကြ ကြောင်း၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ကွဲပြားသော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုမှာ များသောအားဖြင့်တူညီရာ မည်သည် ပြဿနာမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ ဌာနေ ကမန်လူမျိုးများအတွင်းသို့ တဖက်နိုင်ငံမှ ဘာသာတူ လူမျိုးများ ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်လာမှု များပြား လာသည့် အတွက် အထင်အမြင်လွဲမှားကာ ကမန်လူမျိုးတချို့ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ အိုးအိမ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအတွက် နှစ်ဦး နှစ်ဖက်အချိန်ယူဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းများကို ဆွေးနွေးကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ALD) ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဦးလှမြင့်က“အဓိကပြဿနာက တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုး အကာအကွယ်ယူပြီး ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေကြောင့် ပြဿနာတက်တာပဲ၊ မရမာကြီးလည်း ရခိုင်နဲ့အတူတူနေ လာနေကြ တာပဲ၊ အလားတူပဲ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေနဲ့လည်း အတူနေလာတာပဲ ဘာပြသနာမှမရှိဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website true talker February 18, 2013 - 10:44 pm	Yes, it is correct. All must understand that, many needs to make differentiate,Race and Religion. Only4to5majorities of Religions,are in this entire World,but, comparing with Race,even in Burma so called ,there are 135 Races. All the Buddhist are not Burmese Race,and All the Christian in Burma,are not European or Americans. Same as Many people should notice that (all) the Muslims,who are staying in Burma,are not Rohinjar or Bangali, or does’nt belongs to those neighboring countries. Due to my family,we are Burmese,and our passed grand parents,even fought for the country,and deserved and awarded the titles from the State.But,we are not Buddhist Believers. They gave their lives and fought for the country.You cannot say that only Buddhists must stay in Burma,and all other Religion,must be kick out from the country,as to days, Burma’s”racists slogans”, is too awkward, and proof that ,they are lack of knowledge. Can you show me the country with only one Religion believers are staying ? Even in Vatican, not only the Roman Catholics,are staying,there are other Religion of people staying too.We must know that ,we are in 2013,and the World is changing every seconds.But,any one who gives trouble to the country,should not have place for them,even,you are worship Buddhist.
Reply	kyaw naing chay March 9, 2013 - 11:56 pm	ရခိုင်ဟူသည်အမျိုးသီလသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ရမည်အမျိုးကိုထိကသွေးစွန်းရမည်။သီလကိုထိကကြုံးဝါးရမည်။သာသနာကိုထိကရခိုင်ဟူသောမျိုးချစ်စိတ်ကိုပြသရမည်
Reply	စနသြားချေ November 18, 2013 - 1:23 pm	မှန်လိုက်လီခြောင်း